ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာ စိတ်နောက်နေသည်။
Posted by pandora at 1:21 PM
Ma Pan....Ma Pan....Waiting so long for your post....., your drawing impresses me :D
အော.လက်စ သပ်တော့ စိတ်နောက်နေတာကိုး..ဒါမျိူးလေး စိတ်နောက်ချင်ပါတယ်.ပန်းချီမဆွဲတတ်တာဆိုးသဗျာ.ဘယ်ပစ္စည်းကရိယာတွေ ဘယ်ခံစားမှုတွေနဲ့ ဘယ်လိုအားဖြင့် ဆွဲနိူင်တယ်.ဆိုတာမျိူးလေး..တပုဒ်လောက် မျက်ဝါးထင်ထင် ကျန်သူတွေ ဆွဲနိူင်အောင်လုပ်ပေးပါလားဗျာ.ငိုမလိုလို မျက်လုံးလေးတွေ ခုတလော ကျနော်စိတ်နဲ့ဆွဲနေရလို့ပါ။
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး စိတ်ပူလို့ ကမန်းကတန်း
ဟူးးးးး...... တော်ပါသေးရဲ့ :D
ကောင်းတယ်။ ကောင်းတယ။် ဘလော့မလုပ်ရင်ကောင်းတာဘဲ.အားကြီးအချိန်ကုန်တယ်။
နဲနဲတော့ရေးပါဦးလေ တော်ကြာ်နေ စာမရေးတတ်တော့ဘဲနေမယ။် ကကြီးခခွေး
ကိုယ့်ရဲ့ Samsung omnia II ကြီးတော့လွတ်ပစ်ရမလိုဖြစ်နေပြီး လူတိုင်း I နေလို့။။ (အခွင့်ကြုံခိုက်မကြွားလိုက်က မိုက်လို့ထင်)
မနစ်က လာခေါ်တာမှတ်မိသေးလား. ဟွန်း ဟွန်း ဟွန်း.
I'll bringamouse4U @ Sunday :)
အချိန်အားရရင်တော့ ရေးပါဦး။ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ မျှော်နေတယ်။
ကာရီးယိုးဆိုပါလားဟေ့။ အဲ့ကားကြည့်ပြီးပြီ။ ကြိုက်တယ်၊ ကြေကွဲတယ်၊ သနားတယ်။
၀ယ်လှချေလား ဒေါ်ဒေါ်ပန်။း)
အံမယ် သူများတွေ သဘောကျမှာစိုးလို့ဆိုပဲ
သိပ်ကပ်စေးမနဲရဘူး အဲ့လို.. ဒေဝေါကြီးကိုက်လိမ့်မယ် သတိ။
ဒီလောက် အကြာကြီးကတည်းက ကြိုတွက်ထားကြပြီးမှ .. တကယ်လည်း ထွက်ရော အချိန်ကကွက်တိဖြစ်နေတယ်... ကံကောင်းလို့ပေါ့.. :P
ကမ္ဘာပျက် ပြေးတဲ့ အထဲ စာအုပ်တွေ သယ်လာတာကိုတော့ လေးစားတယ်.. ကိုယ်လည်း အဲဒီလိုပဲ သယ်ချင်တယ်..
ဒေါ်ရီတာ ဆီကနေတဆင့်ရောက်လာတယ် မမပန်
တီလဲ ခဲပုံလေးတွေဆွဲတယ် တင်ဖူးတယ်
ခဲတံနဲ့ စရွက်ပေါ်မှာ ဆွဲရတာကိုပဲ ပိုကြိုက်တယ်
( ခေတ်နောက်ပြန်ပဲ ကိုယ်ကတော့ )
ကိုယ်ကတော့ ၁၀ ယောက်လောက်ပဲ သာသာလေးကြွားလိုက်ပါတယ်
လွင်မိုးအခွေကတော့ ဟုတ်တယ် စကားပြောတာ နဲနဲ ရင့်နေတယ်
မလေးစားပုံပေါက်တယ် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေနဲ့ပြောတာတွေလဲပါတော့လေ တမျိုးပဲ
တီ့ ဘလောခ်ကို တချို့တချို့တွေက rated လိုတယ်ပြောတယ်
တီကတော့ unrated ပါပဲ
ဖြစ်နိုင်ရင် PDF ဖိုင်လေးကို wailinn5305@gmail.com ကိုပို့ပေးပါလား..။ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။ တကယ်ဖတ်ချင်နေလို့ ။ မပို့ပေးနိုင်လဲ ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ ညွှန်ပေးပါလား..
စိတ်နောက်နေတယ် ဆိုလို့ အပြေးအလွှား လာကြည့်သွားပါတယ်။ နောက်တောင် ကျနေပါပေါ့လား။ ဒီလောက်လေးများတော့ တို့က စကားထဲတောင် ထည့်မပြောဘူး ဟဲဟဲ။ အတွေးကောင်း အရေးကောင်းသူများ စိတ်နောက်တာတောင် အနောက်ကောင်းလေးပဲကိုး။ ကိုယ်လည်း မအားလို့ မိတ်ဆွေတွေဆီ လေ့လာဆည်းပူးဖို့ မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာနေပြီ။ စိတ်ထဲကတော့ သတိရနေတာပါလေ။ ယုံတယ်ဟုတ်း) ပျော်စရာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေနော့။
စိတ်နောက်တုန်းလည်း စာရေးပေါ့. နောက်တောက်တောက် စာတွေဖတ်ရတာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား :D
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး လေယာဉ်မောင်းကျင့်ဖို့ရယ် ဘီလျံနာသူဌေးတွေနဲ့ အသိဖွဲ့ဖို့ရယ် အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေရလို့ မအားတော့ပါ ဒါဗြဲ
စိတ်ရာ လူရော နောက်နေတာလား...
တွေးရင်း တွေးရင်း ကိုယ်တောင်
စိတ်တော်တော် နောက်သွားတယ်... :D
အမသက်ဝေက အစကတည်းက နောက်နေပြီးသားလေ... အခုမှ စိတ်နောက်တာကျနေတာပဲ :D
ပန်ဒိုရာ စိတ်နောက်နေတယ်ဆိုတာ ဒို့သိတာကြာပြီ။
ကျောက်ချဉ်စိမ်ရင် ကြည်တတ်တယ်ပြောတာပဲ :)
အေးဗျာ… စိတ်နောက်နေတယ်ဆိုပါမှ အလိုက်မသိ တိုက်တွန်းလိုက်ပါဦးမယ်။
“ချက်ခြင်း အနုပညာ”၊ “ကိုဖိုးရမ် မဘလောက်” တို့လို ဟာသလေးတွေ ရေးပါဦးဗျ။ နောက်ပြီး “ဒီမြို့ထဲမှာ” လို ကဗျာအတွဲတွေ ရေးပါဦး။